काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले डा. गोविन्द केसीमाथि गरेको अपमानजनक व्यवहार निन्दनीय भएको बताएका छन् । सामाजिक संजाल ट्वीटरमा ट्‌विट गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन् ।“सत्याग्रहीलाई इच्छा विपरीत छुन पनि पाइँदैन । तर, अनसनरत डा. गोविन्द केसीमाथि सरकारले गरेको अपमानजनक व्यवहार लोकतन्त्रमा अकल्पनीय र अक्षम्य छ । क्रुर तानशाहले मात्र यस्तो निन्दनीय कृत्य गर्न सक्छ । सरकारले आफ्नो पतनको बाटो आफैं खनेको छ,” उनले लेखेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्‍ज जान लाग्दा डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले जबरजस्ती रोकेर ट्रमा सेन्टर लगेको थियो ।
६ आश्विन २०७७, मंगलवार १८:४६
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले डा. गोविन्द केसीमाथि गरेको अपमानजनक व्यवहार निन्दनीय भएको बताएका छन् । सामाजिक संजाल ट्वीटरमा ट्‌विट गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन् ।
“सत्याग्रहीलाई इच्छा विपरीत छुन पनि पाइँदैन । तर, अनसनरत डा. गोविन्द केसीमाथि सरकारले गरेको अपमानजनक व्यवहार लोकतन्त्रमा अकल्पनीय र अक्षम्य छ । क्रुर तानशाहले मात्र यस्तो निन्दनीय कृत्य गर्न सक्छ । सरकारले आफ्नो पतनको बाटो आफैं खनेको छ,” उनले लेखेका छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्‍ज जान लाग्दा डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले जबरजस्ती रोकेर ट्रमा सेन्टर लगेको थियो ।
Prevजीवनोपयोगी टिप्स : ‘देखासिकीमा होइन आत्मविश्वासमा अघि बढ्नुहोस्’
कांग्रेस सांसद गगन थापाले दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने
‘प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण नेपालमा कोरोना थप जटिल अवस्था पुग्यो’ : गगन थापा
‘प्रदेश नं. ५ का कानुनमन्त्रीको दादागिरीलाई नेकपाले सामान्यीकरण गर्‍यो’ : गगन थापा
‘डा.गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सबैले बोल्नु पर्ने बेला आएको छ’ : गगन थापा